Otu esi etinye ImageMagick na Ubuntu 20.04 - LinuxCapable
September 2, 2021 August 15, 2021 by Jọshụa James
Wụnye ImageMagick na Ubuntu 20.04
Wụnye ImageMagick site na APT
Wụnye ImageMagick site na Isi Iyi
Na-anwale ImageMagick na Ubuntu 20.04
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta Otu esi etinye ImageMagick na Ubuntu 20.04 iji usoro ntinye APT ma ọ bụ isi iyi.
Ngwungwu achọrọ: Git
Ọ bụrụ na ị na-achọ ndị ụdị GIT kacha ọhụrụ, gaa na ndu anyị, Otu esi etinye ma melite Git kacha ọhụrụ na Ubuntu 20.04.
Ugbu a, ọ bụrụ na ị wụnye ImageMagick iji ma ndabara Ebe nchekwa Ubuntu ma ọ bụ na Isi mmalite ImageMagick, ule logo.gif ga-adị na ndekọ ụlọ.
huzie Megharịa onyonyo. Yiri ịtụgharị, mana degharịa onyonyo izizi.
Na nkuzi, ị mụtara ụzọ abụọ iji wụnye ImageMagick on Ubuntu 20.04. N'ozuzu, ImageMagick ka na-ewu ewu nke ukwuu, karịsịa na gburugburu ebe nrụọrụ weebụ WordPress na plugins, ma ọ bụ nhọrọ a nwalere na anwale maka igosipụta, ịmepụta, ịtụgharị, gbanwee, na dezie ihe oyiyi raster.